पहिलो सर्म्पर्कमा किन रगत आएको होला ??? यौन जिज्ञासा | मरुभूमीको कोसेली nepalkuwait
पहिलो सर्म्पर्कमा किन रगत आएको होला ??? यौन जिज्ञासा
Posted on मार्च 27, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी
योनिद्वार पातलो झिल्लीले छोपिएको हुन्छ, जसलाई नेपालीमा योनिच्छद र अंग्रेजीमा जymभल भनिन्छ । यसको आफ्नै कुनै निश्चित विशेष कार्य भने थाहा भएको छैन, तर यसमा भएका प्वालहरूबाट महिनावारी हु“दा आउने रगत निस्कन्छ । घेरैजसो महिलामा यो झिल्ली योनिद्वारको भित्ताबाट अलिकति मात्र बढेको हुन्छ अर्थात् योनिद्वारलाई पूरै ढाकेको हु“दैन । योनिच्छदको आकार, बनावट तथा मोटाइ व्यक्तिअनुसार फरक पर्न सक्छ । योनिद्वारको वरिपरी घेरा हालेजस्तो भए बललगबिच योनिच्छद भनिन्छ भने झिल्लीको बीचमा केही पट्टी भएकोलाई कभउतबतभ भनिन्छ । कुनै योनिच्छद चाल्नीजस्तै प्वाल-प्वाल परेको हुन्छ, जसलाई अचष्दचषयrm भनिन्छ । शिशु जन्माइसकेका महिलाहरूमा भने यसको केही अंशको घेरा मात्र पाइन्छ ।
पहिलो यौनसर्म्पर्क हु“दा महिलाहरूमा रगत आउने प्रमुख कारण यही योनिच्छद च्यातिनु हो । यसरी योनिच्छद च्यातिएर आउने रगतको मात्रा थोरै र पीडा पनि हल्का हुन्छ । यौनसर्म्पर्क गर्दा पाइने सुखका क्रममा उक्त पीडालाई महिलाहरूले सजिलै बिर्सन सक्छन्, यो धेरै चासोको विषय पनि बन्दैन । केही महिलाले पहिलो पटक मात्र होइन, त्यसपछिका केही यौनसर्म्पर्कमा पनि रगत देखिने तथा दुख्ने अनुभव गरेको भेटिएको छ । कुनै-कुनै महिलाको योनिच्छद जन्मजात नै नहुन वा राम्रोस“ग विकास नभएको हुनसक्छ अथवा अन्य कारणले च्यातिइसकेको हुनसक्छ । त्यसैले त्यस्ता महिला पर्ूण्ारूपमा कुमारी भए पनि, यौनसर्म्पर्क नै नगरेको भए पनि पहिलो यौनसर्म्पर्कका बेलामा पटक्कै रगत नआउन वा कुनै पीडा नहुन सक्छ ।
किन दुखेको होला –
यौनसर्म्पर्क मुख्यतः सुखमय हुने भए पनि अनेक कारणले पीडायुक्त हुनसक्छ । पीडा हुने कारणहरूमा योनिको संक्रमण प्रमुख हुनसक्छ । यौन सर्म्पर्क सुरु गर्ने बेलामा पीडा अनुभव हुन्छ भने क्यान्डिडा वा हर्पिसजस्ता संक्रमण पनि यसको कारण बन्न सक्छ । त्यसैगरी लिङ्गको प्रवेश एकदमै भित्रतिर हु“दा पीडा अनुभव हुन्छ भने क्लामाईडिया वा गोनोरियाको संक्रमणलाई संकेत गरेको हुनसक्छ । यस्ता संक्रमणले पनि पाठेघरको मुख वा पाठेघरवरिपरिको अन्य भागलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । हर्पिस, क्लामाइडिया वा गोनोरिया आदि संक्रामक यौनरोग हुन् । तपाईंलाई थाहै होला, यौनरोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यौनसर्म्पर्कको माध्यमबाट र्सछ । त्यसैगरी योनिद्वारको छेउमा भएको गन्थ्रिको संक्रमण पनि यसको कारण हुन सक्छ, तर तपाईंले त्यस विषयमा खासै लेख्नुभएको छैन ।
योनि सुख्खा भएको स्थितिमा यौनसर्म्पर्क गर्दा पनि पीडादायक हुन्छ । यस्तो बेलामा प्-थ् व्भििथ जस्ता चिप्लो पदार्थ प्रयोग गर्नु लाभदायक हुनसक्छ । विशेष गरेर भयातुर वा डर भएको स्थितिमा यौनसर्म्पर्क गर्न लाग्दा अकस्मात् योनिको मांसपेशीमा संकुचन भै कडा हुन्छ । यस्तो बेलाकै यौनसर्म्पर्क पीडायुक्त हुन्छ । अंगे्रजीमा यस किसिमको अवस्थालाई ख्बनष्लष्smगक भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा तनाव कम गर्नर्ुपर्छ । पीडादायक तथा अप्ठयारो यौनसर्म्पर्कलाई चिकित्सकीय भाषामा म्थकउबचभगलष्ब भनिन्छ, जुन महिला तथा पुरुष दुवैलाई हुन सक्छ । के कारण हो पत्ता लगाउन चिकित्सकको सहयोग लिनर्ुपर्छ ।
यौनसर्म्पर्क नगर्दा यौन उत्तेजना
तपाईंमा यौनेच्छा छ । यसले तपाईंका विभिन्न यौन तथा अन्य अङ्गले राम्रैस“ग कार्य गरिरहेको संकेत गर्छ । रागरसले यौनेच्छा जगाउ“छ । यौनेच्छा बढ्दै गएपछि त्यसलाई पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यौनसर्म्पर्कमा संलग्न हुनु यसलाई पूरा गर्ने र्सवमान्य र विवाहितका लागि सुलभ उपाय हो । यौनेच्छा भएर पनि यसलाई शान्त पार्न नपाएको स्थितिमा यो बढ्दै जान्छ । कतिपय स्थितिमा वैकल्पिक उपायजस्तै कि हस्तमैथुनको माध्यमबाट पूरा गर्ने प्रयास गरिन्छ । अर्कातिर यस्ता कुनै उपाय नगरिएको बेला पनि स्वप्नदोष -यौनउत्तेजक सपना देख्नु) जस्ता कार्यबाट यौनेच्छा पूरा गरिन्छ । किन यौनसर्म्पर्क नगर्दा यौन उत्तेजना हुन्छ भन्ने कुरा बुझनु नै भयो होला ।
योनिमा केही पसाउनु महिलाले गर्ने हस्तमैथुन हो । यसो गर्दा योनिमा पर्याप्त मात्रामा रस आइसकेको हुनर्ुपर्छ र यौन उत्तेजना हु“दा यो स्वाभाविक रूपमा नै हुन्छ । यस्तो नभएको स्थितिमा अन्य कुनै चिप्लो पदार्थको प्रयोग गर्न भने बिर्सनु हु“दैन । पसाउने कुरा सफा भएको कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । औंला पसाउ“दा आफूंलाई आनन्द पाउने स्थान खोज्न सकिन्छ । भगाङ्कुर होस् वा योनि, हस्तमैथुनमा औंलाको प्रयोग नै महत्वपर्ूण्ा हुन्छ । औला बहुउपयोगी हुने भएकाले नै चाहेअनुरूप दबाब, गति, तरिकामा गर्न सकिन्छ जसले आनन्द थप्छ नै । यसबाहेक महिला शरीरको अन्य अङ्गहरूको र्स्पर्श, मर्दन वा सुमसुम्याइ, यौनआनन्द पाउने कुराका सर्न्दर्भमा सहायक नै हुन्छन्, तर यसरी यौनआनन्द लिने क्रममा महिलाहरूले यौन प्रसाधन वा वस्तुहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छन् ।
अर्को महत्त्वपर्ूण्ा कुरा के भने तपाईंको अङ्गमा तपाईंको नै प्रथम अधिकार हुन्छ र त्यसलाई तपाईंले चाहेअनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । हस्तमैथुनमा अभ्यस्त भएर श्रीमान्स“गको यौनसर्म्पर्कबाट धेरै परहेज गरियो भने वैवाहिक सम्बन्धमा पनि नकारात्मक असर पर्न सक्छ । त्यसैले समाधानका लागि तपाईंहरू दुवै जना मिलेर आफूमा परेका असजिलाका सम्बन्धमा कुरा गर्दै, त्यसको समाधान अनि कसरी बढी यौनआनन्द लिन सकिन्छ भन्ने कुराकानी गरेर विभिन्न प्रयोग गरी दुवै जनालाई आनन्द आउने उपाय अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ ।
« मीठो कुरा गर्दा त खुसी लाग्छ, प्रेम र यौन एकअर्काका परिपूरक »
sher bahadur karki, on मार्च 27, 2010 at 2:18 बिहान said:
धन्य बाद मित्र आर बि जी
तपाई जहिले पनि हामी ठिटा हरुलाई मन पर्न्ने महिला को गोप्य चिज को कुरा लेख्नु हुन्छ जसले गर्दा पुरुस लै मात्र नभएर महिला को लागि पनि यो कुरा अति आबस्येक पर्दछा यो कुरा जान्न को लागि तपाई जस्तै अरुले पनि एसो औला ले छामेर हेर्ने पुरुस कमै मात्र मा हुन्छन जस्तो मलाई अनि अर्को कुरा भित्रै सम्म हेर्न कुना परकर को बत्ति पो युज गर्नु पर्छ त्यो पनि आगामी दिन हरु मा हामी पाठक सामु पस्किने जमर्को गर्न्नु भए मा मा जस्तै अरु पनि साथी संघिनी हरु तपाई को एस्त खाले अति आबस्ये पूर्ण कुरा थाहा पाउने पो थिएकी
हामी हामी पुरुस ठिटा हरु आफ्नो तिर्सना मेटिए पछी एस्त कुरा मा वास्तानै गर्दैनौ कहाँ के छ
भन्ने कुरा उही सुरुवाल भित्र माछो सारी भित्र पुतली तेही भएर पो बिग्रियो
अनि बल्ल थाहा भयो अर्को कुरा २०५० साल असार महिना देखि मङ्सिर महिना सम्म नेपाल को राजधानी काथ्मान्ठौमा भान्टा बेच्ने मदिसे जति लै पुलिस ले समाऊ थियो किन कि पत्म्म
क्याम्पस मा टोएलेट जाम भयो बनेर सफा गर्दा भान्टा ले पो जाम भए को रहेछ रे लहै होसियार कतै महिला मा भन्त को तरकारी खाने बानि नगरौ है
के देख्नु पर्यो, on मार्च 28, 2010 at 9:53 अपराह्न said:
ल हेर साथीहो कमाल कति हेर्ने हो